Labadii shaqaale ee MSF, ee la af-duubay ayaa la sii daayay. - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
Labadii shaqaale ee MSF, ee la af-duubay ayaa la sii daayay.
28.04.2009 | Gobolka Bakool, Koonfura iyo bartamaha Soomaaliya, War-Saxaafadeed
Nayroobi, 28 Abriil 2009 – Labadii qof ee u shaqaynayay Ururka Dhakhaatiirta aan Xuduudda Lahayn ee MSF, ee lagu af-duubay 19 Abriil gobolka Bakool ee Soomaaliya ayaa iyaga oo nabad qaba maanta la sii daayay. “Sii daynta saaxiibadayo oo nabad qaba, caafimaadkooduna aad u wanaagsan yahay, waxa ay naga kor qaaday culays iyo wel-wel aad u balaaran.” Waxaa yiri Dag Horntvedt, ku simaha Madaxa Ergada MSF ee Soomaalia. “Qoysaskoodu waa la ogaysiiyay, si aad ah ayaana ay u faraxsan yihiin. Hadd hawsha noo taallaa waa in aanu labadan qof dib ula midayno qaraabadoodii iyo saaxiibadood sida ugu dhaqso badan, iyo in aannu u fidinno wax Alla wixii taageero ah ee laga yaabo in ay u baahdaan si ay uga soo kabtaan xaaladdii soo martay…”
Dhakhtarka Beljimka ah iyo Isku-duwaha Caafimaadka waxaa la afduubay mar ay ka soo laabanayeen safar kormeer daawooyinka la xiriira oo ay ku tageen Rabdhuure. Ilaa waqtigaas, marar faro badan ayaa ay u suurtogashay in ay gaarsiiyan qoysaskoodii iyo saaxiibadood, iyaga oo mararka qaar adeegsanaya warbaahinta, in ay xaaladdoodu gaarsiisneyd ilaa heerka ugu wanaagsan ee la fili karo.
“Sii daynta saxiibadayo waxaa suurtogal ka dhigay taageero la yaab leh oo laga helay bulshada iyo hogaamiyaasha Bakool iyo Baay, iyo weliba qaybaha kale ee Soomaalia,” sidaas waxa yiri, isaga oo sii sharaxaya Horntvedt. ” Abaabulkoodii degdegga ahaa ee ay u galeen xoreynta saaxiibadayo ayaa isbeddelkaas oo dhan keentay. Taageeradani waxa ay muujinaysaa mahadnaqa (sida ay raalida uga yihiin) bulshada iyo hogaamiyayaasheedu dadaalka aan kala go`a lahayn ee shaqaalahayaga Soomaalida ahi ugu jiraan sidii ay caawimo u gaarsiin lahaayeen dadkooda.”
Laakiin Horntvedt waxa uu aad carabka ugu adkeeyay sida ururkiisu uga caraysan yahay afduubkaas. “Dalalka Soomaaliya oo kale ah, ee dadka aadka u faraha badani ku tiirsan yihiin gargarka bani`aadamnimo, arrimaha noocan oo kale ahi waxa ay halis gelinayaan daryeelka caafimaadka ee ay tahay in dadyowgaasi helaan.”
Tags: dhakhtar, Gobolka Bakool, Koonfura iyo bartamaha Soomaaliya, shaqaale, xoriyad
Qoraalada kale ee ku saabsan Gobolka Bakool, Koonfura iyo bartamaha Soomaaliya
MSF oo loo diiday inay gaarto goobaha abaarta saameysay